Mogadishu Journal » Kevin De Bruyne ayaa kordhiyay heshiiskiisa Man City ilaa 2025
Kevin De Bruyne ayaa qandaraas cusub u kordhiyay kooxda Manchester City ilaa iyo sanadka 2025, sida ay ku dhawaaqday kooxda Arbacadii.
Kubadsameeyaha reer Belgium ayaa u dhaqaaqay Etihad Stadium bishii Ogosto 2015 iyadoo lagu soo waramayo inuu 55 milyan ginni uga soo dhaqaaqay Wolfsburg wuxuuna isku muujiyay inuu yahay mid ka mid ah hibooyinka ugu fiican kubada cagta adduunka mudadaas.
Waayihiisii ​​City, De Bruyne wuxuu ku guuleystay labo horyaal oo Premier League ah, FA Cup, afar EFL Cups waxaana loo magacaabay PFA Player of the Year 2020.
“Waan sii farxi kari waayey,” De Bruyne ayaa sidaa u sheegay websaydhka rasmiga ah ee kooxda.
“Tan iyo markii aan ku soo biiray City sanadkii 2015, waxaan dareemay gurigeyga, waan jeclahay taageerayaasha, qoyskeyga waxey dagan yihiin halkan Manchester, ciyaarteyduna si wanaagsan ayey horumar u sameysay.
Naadiga kubbada cagta waxay u diyaar garoobtay guul. Waxay i siisaa wax kasta oo aan ugu baahdo si aan u kordhiyo waxqabadkeyga, marka saxiixa qandaraaskan wuxuu ahaa go'aan toos ah.
Pep iyo Guardiola waxaan u arkaa kubada cagta si isku mid ah
“Diiradeydu hada waxay tahay hubinta inaan si guul ah ku dhamaanay ololaha haatan socda, natiijooyinkayaga iyo qaab ciyaareedkeena ilaa iyo haatan waxay ahaayeen kuwa aad u fiican, laakiin waxaan u baahanahay inaan hubino inaan xilli ciyaareedka ku dhameysanayno koobkii aan u qalanay.”
Markii uu yimid Manchester, dhowr khubaro ah ayaa su’aal ka keenay go’aanka City ka dib markii xiddiga heerka caalami ee dalka Belgium uu horay ugu dhibtooday inuu ka ciyaaro Premier League-ga kooxda Chelsea. Laakiin talaabadan ayaa noqotay mid guul weyn u ah De Bruyne, oo leh 65 gool iyo 101 caawiye 255 kulan oo City ah, sida lagu sheegay xogta Opta. De Bruyne wuxuu ahaa halyeeygii ololihii City ee xilli ciyaareedkii 2017-18 markii ay gaareen 100 dhibcood oo aan horay loo arag oo Premier League ah, iyadoo 29 jirkaan uu ciyaaray 52 jeer tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay 12 goolna caawiyey 21. Ololihii xigay waxaa ku qasmay dhaawac laakiin De Bruyne ayaa wali dhaliyay lix wuxuuna caawiyay 10 10 kulan oo uu ciyaaray 32 kulan iyadoo City ay dhameystirtay taariikh taariikhi ah oo Premier League, FA Cup iyo EFL Cup oo xaaqday kubada cagta Ingariiska. De Bruyne ayaa ku dhow inuu ku daro biladdiisa xilli ciyaareedkan iyadoo City ay 14 dhibcood ku hogaamineyso hogaanka Premier League, halka ay ku jiraan finalka EFL Cup, semi-finalka FA Cup iyo wareega 8da Champions League halkaasoo ay ku sugan yihiin. ayaa 2-1 ku hogaamineysa Borussia Dortmund ka dib lugtii hore ee Talaadadii - kulan uu dhaliyay islamarkaana door muhiim ah ka ciyaaray goolkii guusha ee Phil Foden. Agaasimaha Football Txiki Begiristain wuxuu intaas ku daray: "